आफैलाई स्व्याग खाता प्राप्त गर्नुहोस् | Martech Zone
आफैलाई स्व्याग खाता प्राप्त गर्नुहोस्
बिहीबार, फेब्रुअरी 23, 2012 सोमबार, मार्च 5, 2012 Douglas Karr
हामीलाई मन पर्छ स्वाग। हाम्रो इनबाउन्ड मार्केटिंग एजेन्सी गत बर्ष हाम्रो पहिलो स्वाग अर्डर गरियो - क सम्मेलनमा भाग लिनेहरूका लागि राम्रो सानो नोटबुक। यो वर्ष हामीले केहि किन्यौं शान्त 2Gb USB ड्राइभहरू त्यो कुञ्जीको समान आकार र आकार हो ताकि तपाइँ तपाइँ तपाइँको कीचेनमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं हाम्रो अफिसले रोक्नुभयो भने, तपाईंले सायद एउटा प्राप्त गर्नुभयो!
स्वाग भनेको के हो? यो लुट, लूट, लूट, लूट… तपाईको बुथ भ्रमण गर्न, तिनीहरूलाई अनलाइन मद्दत, वा swag लॉकर कुञ्जी संग कसैको मात्र साथी हुन को लागी कम्पनीहरु बाट तपाईं प्राप्त खजाना हो। डट कॉम हेडाइमा फिर्ता, म सम्झन सक्दछु कि मैले बोक्न सक्ने भन्दा बढी स्वागको साथ एउटा कन्फरेन्सबाट बाहिर निस्कें, माईक्रोसफ्टबाट एक वायरलेस किबोर्ड र माउस पनि समावेश थियो!
स्वाग आजकल अलि बढी समझदार छ र यसको वरपरको व्यवसाय विकसित हुन जारी छ। यस हप्ता म टीममा धेरै कुरा गर्दै छु WPEngine (संस्थापक) जेसन कोहेन हाम्रो रेडियो कार्यक्रम पाहुना मा छ शुक्रबार) त्यसैले मैले उनीहरूलाई दिएको सुझावमा साँच्चिकै राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ। मैले लिंक प्राप्त गरें SwagLove एक उत्पादन छनौट गर्न र मलाई यो सीधा डेलिभर गर्न!
यहाँ कसरी SwagLove ले कार्य गर्दछ
नि: शुल्क साइन अप गर्नुहोस्, तपाईंको प्रमोशनल उपहार वस्तुहरू छनौट गर्नुहोस्, अपलोड गर्नुहोस् र तपाईंको कस्टम आर्टवर्क स्थित गर्नुहोस्।
तपाईंको लि Get्कहरू लिनुहोस् र ती व्यक्तिलाई पठाउनुहोस् जुन तपाईं चापल्ट गर्न चाहानुहुन्छ
प्रापकहरूले तपाईंको ब्रान्डेड ल्यान्डि page पृष्ठमा लिंक अनुसरण गर्छन् जहाँ उनीहरूको आकार र शिपिंग ठेगाना प्रविष्ट गर्छन्
हामी प्रिन्टि,, शिपिंग, भन्सार र ग्राहक सेवाको ख्याल राख्छौं, कुनै पनि हिचकीको मामलामा (जस्तै 'ओहो, मैले गलत आकारको अर्डर गरें!')
तपाईं केवल रिडीम गरिएको सस्तोका लागि भुक्तानी गर्नुहुन्छ त्यसैले तपाईं कहिले पनि टी-शर्ट वा पैसालाई बेकार गर्नुहुन्न
कती राम्रो छ? Swag को बाकस खरीद गर्नुको सट्टा तपाई बाहिर जान सक्नुहुनेछ वा टाढा दिन सक्षम हुनुहुन्न, अब तपाई आफ्नो SwagLove खाता कोष गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जानुहुँदा भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ! र तपाइँको ग्राहकहरु उनीहरु चाहेको Swag चयन गर्न को लागी! धेरै राम्रो!
टैग: ग्राहक वफादारीग्राहक पुरस्कारस्वागswag खाताswaglove
CMS लाई दोष नदिनुहोस्, थिम डिजाइनरलाई दोष दिनुहोस्
मार्क्स 5, 2012 मा 12: 51 PM
धन्यवाद को लागी धन्यवाद! तपाईलाई हाम्रो सेवा मन परेकोमा म खुशी छु। यो पारम्परिक प्रमोशनल उत्पाद उद्योगको तरीकाबाट धेरै कट्टरपन्थी प्रस्थान हो, तर वेब कम्पनीहरूले यसलाई अँगालेको देखिन्छ।
हामी केहि राम्रा अभिनव व्यापारिक मार्केटि campaigns अभियानहरू हेर्न शुरू गर्दैछौं। WPEngine जस्ता केही कम्पनीहरूले साइन अप प्रक्रियाको भागको रूपमा नयाँ ग्राहकहरूलाई नि: शुल्क स्वाग प्रदान गर्दै छन्। अरूले ग्राहक अधिग्रहण अभियानको भागको रूपमा स्वाग प्रयोग गरिरहेका छन्। उदाहरण को लागी, "यदि तपाई नि: शुल्क परीक्षणको लागि साइन अप गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईलाई शीत शर्ट एक निःशुल्क उपहारको रुपमा दिन्छौं"। वास्तवमै नवीन व्यक्तिहरूले यसलाई अझ अगाडि लिइरहेका छन् र ब्याट्रिजिंग अभियानहरू प्रयोग गर्दै ब्यापारीकरण हुने सामानहरू साइटमा फिर्ता जान साइन इन गर्न र साइन अप गर्नका लागि। आकाश वास्तवमा सीमा हो। यो केवल सुरूवात हो। प्रत्येक टेक मार्केटरको मार्केटिंगमा शारीरिक मर्चेंडाइज (स्वाग) प्रयोग गर्नका लागि नयाँ तरिकाहरू छन्। र धेरै जसो अनलाइन मार्केटरहरू र इन्टरनेट कम्पनीहरूले वास्तवमै उनीहरूका ग्राहकहरूलाई केहि पनि कहिले पनि नपठाउँदछ, भर्चुअल कम्पनीबाट भौतिक केहि प्राप्त गर्न स्वागत आश्चर्यको कुरा हो। यसले वास्तवमै स्थायी प्रभाव छोड्दछ।
यदि तपाईं वा तपाईंको पाठकहरूको कुनै प्रश्न छ वा मसँग व्यापारिक मार्केटिंग को मंथन गर्न चाहानुहुन्छ भने, म मद्दत गर्न पाउँदा खुशी हुनेछु!